Ny Hala-Tàhaka No Endrika Tsy Msiy Fihatsarana Ivelan-tsihin’ny Dokadoka – Adihevitra Anaty Tontolon’ny Blaogy Ao Kenyà · Global Voices teny Malagasy
Ny Hala-Tàhaka No Endrika Tsy Msiy Fihatsarana Ivelan-tsihin'ny Dokadoka – Adihevitra Anaty Tontolon'ny Blaogy Ao Kenyà
Voadika ny 18 Oktobra 2017 11:33 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Martsa 2005)
Ory Okolloh, ilay Keniana Tampom-pahaizana sady tànan-kavanan'ny Global Voices, no manara-maso toejavatra iray mahaliana ao anatin'ny tontolon'ny blaogy ao Kenyà – ny hàla-tahaka nataon'ny mpandalina an-gazety iray avy amin'ny gazety malaza indrindra ao Kenya taminà keniana iray mpanoratra blaogy.
Ity no lahatsoratra voalohany, fanaovana sarintsariny amin'ny filazàna fahabangan-toerana ao amin'ny kabinetran'ny filoha Kibaki, nataon'ny “The Thinker”, Keniana manampahaizana manokana amin'ny informatika izay manasongadina ny iray amin'ireo mpanao sariitatra mpanao tsindrom-paingotra malaza indrindra ao amin'ny firenena.
Ary ity ny tsanganana an'i Clay Muganda ao anatin'ny The Nation, iray amin'ireo gazety ankafizina indrindra ao Kenyà, naverin'ny AllAfrica novokarina. Ny eo ampahatelony eo afovoan'ilay lahatsoratra – “Tolotr'Asa” – dia nalaina tahaka tsy nasiam-panovàna avy ao amin'ny “The Thinker”. Manolotra amin'ny fomba mitavozavoza izao manaraka izao an'ny “The Thinker” i Muganda:
(Ny lahatsoratra niandohana, azo alaina amin'ny aterineto ny ampahany iray tsy navoaka tamin'ilay dokambarotra). Herinandro iray taty aorian'ny lahatsoratra voalohany teo amin'ny blaogin'ny “The Thinker” no nivoaka ny lahatsoratr'i Muganda.
Kitoatoa ny asa nataon'i Muganda tamin'ny fikarohana loharano ho an'ny tsanganany izay tratran'ny “The Thinker” izy tenany mihitsy, fotoana fohy taorian'izay, tamin'ny alalan'ny fanaovany fanambaràna manokana, nilazany fa tsy Clay Muganda izy sady tsy misy ifandraisany amin'ny The Nation na ny Nation Media Group. Andro maromaro lasa izay, nisy fifanoratana mahaliana iray teo amin'ny “The Thinker”, ny sasantsasany tamin'ireo mpankafy azy, Clay Muganda ary ireo tonian-dahatsorany mba hahalalana sao dia “fanatsoahan-kevitra” na “hàla-tàhaka” no nampiasàn'i Muganda ireo an'i “The Thinker”.
Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, araka ny nomarihan'i Ory tamiko tamin'ny imailaka, “ny tombony tamin'io rehetra io, mazava ho azy, dia hoe mamaky ireo bilaogere keniàna ireo Keniana mpanao gazety.” Ankoatra izay – ny tontolon'ny blaogy keniana no tena miasa indrindra sy tena mahaliana indrindra eo amin'ireo tontolon'ny blaogy Afrikana, ary manao asa tonga lafatra amin'ny fanarahana ireo politika mampivanàka sy manahirana eo amin'ny firenena.
7 ora izayAzia Atsinanana